Golaha wakiillada iyo Xukuumadda Puntland wada-tashi hore ka ma ka sii yeesheen shirka Garowe? – Kalfadhi
Golaha wakiillada iyo Xukuumadda Puntland wada-tashi hore ka ma ka sii yeesheen shirka Garowe?
Xildhibaan Cabdirashiid Yusuf Jibriil oo ka tirsan golaha wakiillada Puntland ayaa ka hadlay shirka Garowe ee madaxda federaalka iyo dowlad-goboleedyada, waxaana uu ka digay in ujeedada shirka laga weeciyo halkii loo waday.
Qoraal uu xildhibaanku ka sameeyay arrimaha shirka ayuu ku muujiyay in wax laga walaaco ay tahay qaabka ay madaxda DFS Soomaaliya ee tegay Garowe ay u wajaheen shacabka, wuxuu u arkaa ay jiraan qorshayaal kale oo aan la ogayn in ay ku jiraan hab kulanka bulshada.
Xildhibaanku wuxuu kaloo muujiyay in uusan hore u jirin wada-tashi iyo kala warqab u dhexeeyay xukuumadda iyo golaha wakiillada Puntland, intaanba la guda-gelin shirka.
“Goleyaasha Dowladda Puntland waxaan kula talinayaa in ay ka yeeshaan masiirka shacabka iyo dalka Puntland iskaashi siyaasadeed oo ku dhisan wadatashi iyo is ixtiraam, iyada oo la dhowrayo Dastuurka Dowladda Puntland iyo sida awoodaha uu sharcigu u kala xadeeyey” ayuu yiri Xildhibaan Cabdirashiid
Xildhibaan Cabdirashiid wuxuu sheegay in ay tahay in laga digtoonaado in ujeedada shirka looga faa’iidaysto kala furfurka shacabka iyo dowladda Puntland, waa sida uu yire; iyadoo la adeegsanayo in la dhex jibaaxo dhalinyaro dowlad u ooman balse aan ogayn qorshayaasha siyaasadeed ee qarsoon ee madaxda DFS.
Xukuumadda Puntland ayuu xildhibaanku u jeediyay inay wada-shaqayn buuxda la yeelato goleyaasha kale ee Dowladda Puntland. Docda kale, madaxda dhaqanka iyo urrurada aan dowliga ahayn ayuu sheegay in ay tahay in dowladu muhiimad weyn ay siiso, si buu yiri talo midaysan loo yeesho.
Xildhibaan Cabdirashiid ayaa inta uusan horraantii sannadkan ku biirin golaha wakiillada wuxuu muddo shan sano ahaa sarkaal sare oo ka tirsan madaxtooyada Puntland intii uu hoggaaminayay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Xildhibaan Daqarre “Hadii aan Maqaamka Muqdisho laga soo saarin Shirka Garowe waa guul darro wayn”
Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Galmudug oo goordhow ku geeriyootay Muqdisho